मंगलबारसम्मका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित- समाचार - कान्तिपुर समाचार
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आइतबार गुठी विधेयकको विरोधमा माइतीघरमण्डलमा भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीले दमन गरेको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको जवाफ माग गरेको थियो। संविधानबमोजिम गरिएको शान्तिपूर्ण विरोधमा भएको दमनको यथार्थ विवरण नआएसम्म बैठक अघि बढ्न नसक्ने कांग्रेसको अडान थियो।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले गृहमन्त्री आएपछि जवाफ दिन समय दिने गरी पटक पटक बैठक चलाउन खोजेपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नमानेपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगन भएको थियो। निर्धारित समयमा गृहमन्त्री जवाफ दिन आउन नसक्ने भएपछि मंगलबारसम्मका लागि बैठक स्थगन गरिएको जनाइएको छ। सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल हुने कार्यसूची थियो।
जेष्ठ २७, २०७६ शब्द/तस्विर: जितेन्द्र साह
विराटनगर — विराटनगरमा सोमबार बिहान मुस्किलले ३५ मिनेट जति पानी पर्दा जनजीवन बेहाल भयो । स्थानीयको दिनचर्या संघर्षमय बन्यो । यो महानगरको सबैभन्दा मुख्य क्षेत्र हस्पिटल चोकदेखि शनिहाटसम्मको नाला एवं ढल भरिएर घर/पसल, सडक, सहिद रंगशाला र कोसी अञ्चल अस्पतालकै मुख्यद्वारमा आवागमनमै हम्मे पर्ने गरी पानी जम्यो । महानगरको अन्य भेकको त के कुरा गरि भयो र ? मुसलधारे वर्षा हुँदा वा दिनभरी पानी पर्दा यहाँ के हुन्छ होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सबैतिर पूर्वाधार निर्माण नसकिँदा ढल र नाला भरिएर पानीले निकास नपाउनु एवं अवैज्ञानिक योजनाले सडकको उचाई घरपसलको सतहको समानान्तर वा त्योभन्दा बढी हुँदा वर्षामा यो महानगरमा जतात्यतै पानी जमेर स–साना अस्थायी पोखरीहरु बन्न पुग्छ ।
आवागमनको मुख्य थलो मानिने कोसी अञ्चल अस्पतालको द्वार र सहिद रंगशालाको मुख्य प्रवेश ढोका जलमग्न भइ आवागमनमै कठिनाइ हुन्छ । खेलकुदको अभ्यास र व्यायाम गर्न रंगशाला पुगेकाले त पर्खाल नाँघन बाध्य हुनुपर्छ । अस्पताल आएका सेवाग्राही जसोतसो यताउतिबाट ओहोरदोहोर गरिरहेका हुन्छन् ।
मुख्य सरकारी कार्यालय, अस्पताल र संघसंस्था भएको हस्पिटल चोक वरिपरिकालाई अति आवश्यक कामकालागि बाहिर निस्कँदा र अरुतिरकालाई यहाँ आउनलाई पनि सोच्नै पर्छ । पत्रपत्रिका र औषधि किन्न एवं बिरामी भेट्न अस्पताल आएकाहरु पानी भरिएर नदेखिने खाल्डामा लडिरहेका हुन्छन् । हल्का वर्षामा पनि ठाउँठाउँमा पानी भरिएर आवागमन अवरुद्ध हुनु महानगर विराटनगरको नयाँ समस्या होइन । तर आधाअधुरा निर्माणले समस्या झनै बल्झिएको छ । सबैतिर जारी पूर्वाधार विकासको काम सकिएपछि वर्षामा हिलाम्य र घाम लागेको बेला धुलाम्य हुने अवस्थाको अन्त्य हुने महानगरपालिका कार्यालयका पदाधिकारीहरुले भनिरहेकै छन् ।
उहिलेदेखि रोकिएको कामले गति लिएकाले नागरिक समाज खुशी हुनुपर्ने र अर्को वर्षसम्म महानगरको स्वरुप फेरिइ सकिने उनीहरुको दाबी छ । तर सबैतिर मापदण्ड अनुरुप व्यवस्थित नाला तथा सडक नबनेकाले वर्षामा यी बाधाअड्चन आइराख्ने स्थानीय बताउँछन् । स्थानीयको अनुसार सडकको सतह र नालाको उचाई घरहरुभन्दा बढी हुँदा वर्षाको पानीले निकास पाइरहेको छैन । अर्कोतिर महानगरबासीको महत्वपूर्ण साझा सवाल ‘जनतालाई पीडा दिने गरी जेठ/असारमै विकास किन ? अरु बेला गर्दा हुन्न र ?’
प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ १३:२४
चन्द समूहद्वारा नेकपाका नेतामाथि कुटपिट
एस्काभेटर आक्रमण : छानबिन समिति गठन
सैन्य भर्ना अनियमिततामा २७ जनामाथि छानबिन
उम्मेदवार छनोटमा जुट्यो कांग्रेस
गोल्डेन अवार्ड पाउने काम गरेका छौँ : प्रधानमन्त्री